Mikana Yekudyara muEquities | Ehupfumi Zvemari
Pfungwa zhinji dzevanoongorora zvemari ndeyekuti gore rino kukura kwehupfumi kuchaenderera, kunyangwe iine kushomeka kushoma pane muna 2018. Kune rimwe divi, imwe yehunhu hwayo hwakakosha ndeyekuti pasina mubvunzo pachave nezvimwe zvakawanda zvekusava nechokwadi kupfuura kusvikira zvino. Asi ivo zvakare vanojekesa kuti hapana mubvunzo kuti mikana mitsva ichagadzirwa mumisika yemari. Uye zvichave zvakafanira kuve wakanyatsogadzirira pamberi pezviitiko zvinokwanisika, ndiko kuti pamwe nemari yakazara muaccount account.
Kubva pane ichi chiitiko chinomuka kwemwedzi mishoma inotevera, vaongorori vemusika ava vanoramba vachisimbisa kuti sarudzo yakanakisa yekuita kuti mari ichengetwe ichaitika kuburikidza nemisika yemari. Nekuti zvirizvo, ndivo mari yemari ine hukuru hukuru hwekugona kweiyi yakaoma kosi yemusika wemari iri pamberi pedu. Kunyangwe kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa iyo njodzi hombe kubatanidzwa mune ino sarudzo yekudyara.
Izvo hazvigone kukanganwika kuti isu tinouya kubva gore iro iro bhenji yekuyera yeSpanish stock market yave padyo ne15%. Uye kana, sekutaura kunoita nyanzvi mumusika wezvemari, kukura kwehupfumi kucharamba kuchienderera, kunyangwe paine kusimba kudiki pane muna 2018, hapana mubvunzo kuti panogona kunge paine chikuru kutya pakati pevashambadzi vadiki nepakati kuti mhedzisiro yacho ingave yakatoipisisa kupfuura mugore rapfuura. Ichi ichokwadi chiri patafura uye nekudaro chinofanirwa kutariswa nehungwaru chaihwo uye nekunyepera mukuita.
1 Mikana yebhizimisi
2 Kushanda munyika dzichiri kusimukira
3 Sarudza mari yeterevhizheni
4 Maitiro akakwenenzverwa panguva ya2018
5 Yakarongedzwa mari yekudyara
6 Renewable simba
Imwe yedzakanakisa dzimwe nzira dzekudyara mugore rino razvino, mumaonero echikamu chikuru chevanoongorora zvemari, yakanangana nemakambani e yepakati-chivharo. Ndivo vanogona kuita zvirinani kupfuura mamwe ma equities. Mupfungwa iyi, imwe yemaitiro anonyatso kuvandudza kondirakiti inoitwa kuburikidza nemari yekudyara iyo inotsvaga kutenga vatungamiriri vemakambani madiki akanyorwa pamisika yemari.
Pane zvakawanda zvingasarudzwa zvinogona kukuita kuti uwedzere mashandiro ako pane zvimwe zvekufunga zvehunyanzvi. Kusvika padanho rekuti vane mukana wekudzokororazve, mune mamwe masosi emusika wemasheya, anonyanya kukosha kupfuura mune akawanda ekuchengetedzwa kweiyo inosarudzika indekisi yemari, iyo Ibex 35. Kunyangwe iwe usisina imwe sarudzo kunze kwekutora njodzi hombe mukushanda nekuda kwekuti ivo vanopa kusagadzikana kukuru mukuchinja kwemitengo yavo. Nemisiyano yakakosha pakati pemitengo yayo yepamusoro uye yepasi mune chimwe chikamu chekutengesa.
Kushanda munyika dzichiri kusimukira
Yechipiri yezve nzira dzekudyara iwe dzaunogona kushandisa kubva ikozvino zvichienda mberi ndeye kutsauka kwemari yako kuyerera kune nzvimbo dziri kubuda. Ose maviri kubva pakuona kwemaitiro uye enyika iyo inopa ino yakasarudzika hunhu kubva kune ese maonero maonero. Zvakanaka, mune ino pfungwa, chikamu chakanaka chemabheti evanoongorora zvemari vari kubheja pamisika yemuno yemari. Ivo vanofungidzira kuti vanogona kuita zvirinani munzvimbo dzemunyika dzakasimukira.
Nekudaro, gore rino isu tichafanirwa kuve takanyanya kusarudza mukutarisa mikana yebhizinesi iyo ichaunza misika yemakambani iri kubuda. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti pachave nemisiyano mizhinji pakati pezviyero zvemimwe misika yequity neiyo yevamwe. Nemisiyano inogona kusvika makumi maviri kubva muzana mushure memwedzi gumi nemiviri inotevera. Uye uko zvichagara zvichidikanwa kuti uzive izvo China kudzikisira mari yako sezvo chinhu ichi pasina mubvunzo chinogona kuchinja shanduko yemisika iyi irikubuda.
Sarudza mari yeterevhizheni
Chirevo chaicho chepakutanga chegore rino razvino ndicho chinouya kubva kune ino yakasarudzika mari yemari kuita kuti kuchengetedza kwacho kuve kwakanyanya. Chero zvazvingaitika, mugero waunofanirwa kusarudza kune ino yekudyara imari yekudyara iyo ine hunhu uhu. Mukati mavo, dzimwe pfungwa dzinoenda mukusarudzwa kwemasangano seakakosha seaya anomiririrwa ne ecology, hutano kana marobhoti. Hazvishamise kuti, ivo vane mukana wekukoshesa kwakakwirira kupfuura izvo zvezvimwe zvikamu zvemusika wemasheya.
Dambudziko hombe rekuita sarudzo iyi nderekuti vane mari chaiyo yekudyara iyo ichangobva kugadzirwa uye nekudaro zvinokutorera nguva yakareba kuti uzviwane. Kune rimwe divi, mamwe emhando idzi dzekudyara dzinotengeswa nemakomisheni akawandisa anozoita kuti iwe unetseke kuti basa ravo rinotevera rakakosha here kana kuti kwete. Chero zvazvingaitika, zvinoumba chimwe chezvishamiso zvikuru kuti gore rakaomarara rinogona kutiunza kumisika yemari. Pamusoro pekumwe kufunga kwehunyanzvi hunhu.
Maitiro akakwenenzverwa panguva ya2018
Imwe bheji ichave iyo inoenderana nemitengo yemusika wemasheya yakagadzira kuita kwakaipisisa mugore rapfuura. Chero zvazvingaitika, danho iri rinosanganisira njodzi zhinji kupfuura dzakajairika mune aya kesi nekuda kwezviitiko zvakakosha zvinoratidzwa neaya mare emari. Iwe haugone kukanganwa kuti mazhinji eaya maitiro anotangirwa ne a yakasimba downtrend izvo zvinoita kuti kutora kwenzvimbo kuve nenjodzi kubva panguva idzi chaidzo.
Kune rimwe divi, iyi imwe nzira iyo inoitirwa kune yakatarwa diki uye yepakati investor chimiro. Iko kuvhiyiwa kune njodzi huru kunokunda, kunyangwe pakupedzisira mhedzisiro yacho inogona kuve yakanaka kune zvako zvaunofarira. Chete kana une hasha kwazvo Mukuratidzira kwako kumusika wemasheya, iwe unofanirwa kufunga nezve iyi sarudzo mumisika yemari. Ehe, ichokwadi kuti iwe unozokwanisa kuwana mari yakawanda gore rino, asi nekuda kwezvikonzero zvakafanana, ikusiire ma euro mazhinji munzira iyo inokuendesa iwe pakupera kwegore. Naizvozvo, iri imwe sarudzo asi yakatorwa nekungwarira kukuru kupfuura iyo yese.
Yakarongedzwa mari yekudyara
Unogona kusazviziva, asi iri kirasi yezvigadzirwa zvemari zvinozivikanwa nekuti ndeavo vanoedza dzokorora nenzira chaiyo Maitiro eiyo index index kana yakatarwa yemari indekisi inogoneka, uchigara uchiedza kuzviswededza padiki padiki kubva pane hunhu hweiyo index. Icho chirongwa chinoshanda kwazvo chekudzivirira kutsauka kubva kumahombekombe anounzwa neese epasi rese masheya indices. Chimwe chinhu chingakutungamira iwe kuti uve neshamhu isinganzwisisike kubva zvino zvichienda mberi.
Iri kirasi rezvigadzirwa zvemari rave kuita mufashoni mumakore achangopfuura nekuda kwezvishuwo zvevashambadzi vadiki nepakati kuti dzokorora zvakafanana kumaindekisi kana zvikamu zvemisika yemari. Nenzira iyi, hakuzove nekutsauka, kunyangwe kushoma, kune zvirinani kana zvakanyanya mukuzvidzivirira kwako. Kune rimwe divi, zvichave nyore kwazvo kuyera kuti chii chaicho mamiriro ekudyara kwako uye kuti chinhu ichi hachigone kuwanikwa kuburikidza nemari yakajairika mari yekudyara.
Kana paine kubheja pane chikamu chakanaka chevanoongorora zvemari vanobvumirana, izvi hapana mubvunzo izvi. Ivo vanotenda kuti inogona kuva nenzira yakanaka kwazvo mugore rakaoma kwazvo kumisika yemari senge iyi. Ichi chikumbiro chiri kubuda pachena asi icho chinogona kukupa unopfuura mufaro mumwe kubva panguva dzino chaidzo. Hazvishamisi kuti kirasi iyi yemakambani ine kukura kugona, uye nekudaro purofiti, inonakidza kwazvo. Makakomberedza manhamba maviri uye mune chero mamiriro akakwira kupfuura ayo anopiwa nemamwe masekete emunyika uye epasi rose equities.
Kune rimwe divi, haufanire kukanganwa kuti chikamu chebhizinesi ichi ndicho chakaunza mhedzisiro yepamusoro mumusika wemasheya panguva ye december mutema iyo yakazadza misika yezvemari. Muzviitiko zvakawanda neyakajeka kwazvo muyero iyo neimwe nzira yakashamisa chikamu chikuru chevashambadzi vadiki nepakati. Takatarisana nemamiriro akaomesesa uko ese masheya kukosha kwakadzikira chikamu neseshini uye pasina kana mabhureki mukudzikira kwavo. Iwe unotoziva kuti iwe uchafanirwa kusarudza emagetsi anovandudzwa kana iwe uchida kuita iyo kuchengetedza kunobatsira kubva zvino zvichienda mberi.
Sezvaungave iwe wakaona, mazano haazoshayike mugore iro rinofungidzirwa kunge rakaomera vatyairi. Iko kusarudzwa kwemari yemari kunenge kuchikosha, asi pamusoro pezvose kuve nemoyo murefu wekuziva kuti inguvai yaunofanirwa kuisa mari yako. Mupfungwa iyi, rairo rakanakisa kwete rekumhanyisa pasi pemamiriro api zvawo sezvo iwe uchigona kubhadhara zvakanyanya uye nekudaro uchisiya maeuro mazhinji munzira ye2019. Kunze kwehumwe hunyanzvi uye kunyangwe kufunga kwakakosha kwemusika wemasheya vanozvikoshesa. Zvekuti mukupedzisira iwe wozadzisa chinangwa chauri kutsvaga uye icho ndechekuti pakupera kwegore yako yazvino account bhalansi yakanyanya kuwanda kupfuura panguva ino. Iwe uchine mashoma ekugadzira zano rekudyara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Kuenzana mikana yekudyara